Lifepo4 Batrị, Lithium Batrị, Solar Battery - Lithtech
Shenzhen Lithtech Energy Co., Ltd. bụ a elu-tech enterprise, pụrụ iche na R & D, mmepụta na ahịa nke rechargeable Lithium batrị ngwaahịa. Nke na-eme n'ụzọ zuru ezu na nnyocha & mmepe, mmepụta na ahịa na elu mma lithium batrị.
Shenzhen Lithtech Energy Co., Ltd. bụ ụlọ ọrụ dị elu nke teknụzụ, nke pụrụ iche na R&D, mmepụta na azụmaahịa nke ngwaahịa batrị Lithium na-ebugharị.
Nke na-eme n'ụzọ zuru ezu na nnyocha & mmepe, mmepụta na ahịa na elu mma lithium batrị.
Ngwa: High Cyclic Ngwa: 4 × 4 ugbo ala Recr ...
Lithtech TE24200 Deep okirikiri 24V 200Ah LiFePo4 B ...
Ejirila Lithtech Lithium 24V mee ihe maka nnọchi nke Lea ...
Gosiri voltaji 12.8V gosiri ikike 200Ah Housing IP56 ABS ikpe ...
Lithtech ESS Powerwall ngwakọ 48V 200Ah LiFePO4 ...
100ah 48v 5KWH <5000 Ndụ Cycles na 80% DoD (Omimi nke Ihapu) Na Ngosipụta ihuenyo ...
Ndị a bụ ndị zuru okè maka ihe RV, camper van, ụgbọ mmiri trolling moto ma ọ bụ ọbụna anyanwụ ike s ...
Lithtech TE12300 12.8V 300Ah RV Battery Pack n'ihi na ...
Egwuregwu eletriki Nomonal Volom 12.8V Nhọrọ Ike 300AH Ener ...
Atụmatụ: Ntughari ụlọ ọrụ na-ekwe nkwa karịa 6000 cycles na 80% DoD Sle ...
Lithtech TE4000 bụ 48V 100Ah miri okirikiri lithium batrị .Your kacha mma ọzọ dochie y ...
Product aha miri okirikiri 12v 100ah lifepo4 lithium ion batrị elu ọnụ Volta ...
Lithtech na - enyere gị aka igwu egwu ogologo oge ugboro abụọ maka ụgbọ golf gị ma ọ bụ ụgbọ eletrik.
Lithtech batrị dị omimi nke batrị bụ nke kachasị mma iji nweta ume ugbu a .Ọ bụ ezigbo lithium kachasị ike, isi iyi nke ike karịa.
Lithtech na-akwado OEM .Lithtech lithium batrị bụ ihe zuru oke, ogologo ndụ ike ndụ. ogologo ndụ ọrụ na ọgụgụ isi batrị management usoro.
Anyị nwere ezigbo ndị ọrụ aka ọrụ, nke nwere ike haziri dị ka ndị ahịa chọrọ.
Shenzhen Lithtech Energy Co., Ltd. bụ ụlọ ọrụ dị elu nke teknụzụ, nke pụrụ iche na R&D, mmepụta na azụmaahịa nke lithium batrị na-ewepụta ọkụ.
Olee otú Iji Mee Energy Nchekwa Power Stations odi mfe na ntụkwasị obi?
01-Gini kpatara nchekwa nchekwa ike nwere nchekwa nchekwa? Anyị nwere ike ịkọwa ya site n'echiche nke ike eletrik. Voltaji na nke ugbu a bụ otu akụkụ, volta dị mfe, ma ọ bụrụ na enweghị ugbu a, ọ nweghị ihe egwu, dịka 10KV, 220KV akara elu, anyị na-eji insulator iji c ...
2021 / Jun / Fraị
Kedu ihe dị iche na mkpụrụ ndụ nke anyanwụ na nchekwa batrị lithium-ion ike nchekwa
Solar batrị bụ ụdị ike ọgbọ akụrụngwa, nke na-enweghị ike ịchekwa ike eletrik, ebe batrị ion ion lithium bụ ụdị batrị nchekwa, ma nwee ike ịchekwa ọkụ eletrik maka ndị ọrụ iji. E jiri ya tụnyere ike nchekwa lithium-ion batrị, otu ọghọm nke Sol ...
2021 / Jun / Na
Lithium batrị nzọụkwụ-na nzọụkwụ-ala usoro
1. Lithium batrị buck-boost test Nke mbụ, hapụ batrị lithium ka ọ gbadata na 3.3V site na mgbapụta mgbada, ma nyezie microcontroller na modul Bluetooth ahụ, ma mee atụmatụ ibuli ya na 7V iji buru ibu. N'ihi: The Bluetooth modul adịghị arụ ọrụ na-apụghị chọọ. Wepu t ...
Ihe omuma banyere onye na - eduzi ihe maka batrị ion lithium
Dị ka akụkụ dị mkpa nke batrị lithium ion, ndị na-eduzi ihe, ọ bụ ezie na ọ nwere obere obere batrị ahụ, ọ na-emetụta arụmọrụ nke batrị lithium ion, ma nwee mmetụta na imeziwanye arụmọrụ batrị, mmepe ikike, arụmọrụ ọnụego. , wdg. Nnọọ imp ...
Nwebisiinka  2020 Shenzhen Lithtech Enegy Co., Ltd